Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinta Axmaarada oo Kubaaqay Kacdoon Cusub.
Ururka Dhalinta Axmaarada oo Kubaaqay Kacdoon Cusub.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya cabsi aad ubadan oo lasoo daristay taliska wayaanaha iyo kuwa kabaha uqaada, waxaana lasheegayaa in khal khalku uu gaadhay meel aan lasaadaalin karin.
Khal khalka iyo cabsida soo food saartay taliska wayaanaha iyo kuwa uu ku adeegto ayaa timid kadib markay Ururka Dhalinyarada Axmaaradu soosaareen baaq kuwajahan dhamaan shucuubta kala duwan ee lagumaysto ee wadanka Itoobiya looyaqaano kudhaqan.
Ururka Dhalinta Axmaarada ayaa sheegayin guud ahaan dadwaynuhu ay isu soobaxaan kowda bisha soosocota ee Maskaram oo ah maalinta uu bilaabanayo sanadka cusub ee tirsiga Itoobiya. Dhalinta qoomiyada Axmaarada ayaa shucuubta kala duwan ee lagumaysto kacodsaday in ay hal mar ah kacdoon midaysan karidaan guud ahaan wadanka si kooxda dhiiga shacabka kunaaxda ee TPLF karkaarka loowaydaariyo.
Kooxda mowjadaha siyaasadaha ah ay sitaan ee TPLF ayaa aad uga walaacsan baaqa ururka dhalinta Axmaarada, oo haduu hirgalo keeni kara kala dhaqaaq iyo isku yaac xukuumada Wayaanaha ah, waxayna kooxdu bilowday dadaalo ay kaga hortagayaan baaqa ururka dhalinta Axmaarada.
Horaantii todobaadkan ayay ahayd markay Ururka Dhalinta Oromada ee QEEROO ay soosaareen baaq ay bulshada Oromada kaga codsadeen in ay guryahooda isku reebaan isla markaana diidaan cid kasta oo isku dayda in ay dhex socoto Gobolka Oromada, wuxuuna codsigii ururka QEEROO u hirgalay sidii loogu tala galay.
Taliska wayaanaha iyo kuwa u adeega ayaa kuguul daraystay in ay kahortagaan kacdoonada sidii mowjadaha uga socda qaybo badan oo dhulka ay gumaystaan ah, waxaana larajaynayaa in uu qabsoomidoono kacdoonka shacab ee ururka dhalinta Axmaaradu ay iclaamiyeen.